कोरोना नियन्त्रणको ‘गृहकार्य’ खोइ ? – Chitwan Post
कोरोना नियन्त्रणको ‘गृहकार्य’ खोइ ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुन २८, २०७६
विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले दिनहुँजसो विभिन्न निर्णय गर्दै आएको छ । तर, सरकारले जेजसरी नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ त्यसका लागि गृहकार्य भने गर्न सकेको देखिएको छैन । सरकारले नेपाल प्रवेश गर्ने स्थलमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कडाइका साथ स्वास्थ्य जाँच गराउन, अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्न, प्रभावित देशबाट आउने उडान निरूत्साहित गर्न, प्रभावित देशका विद्यार्थीलाई एनओसी नदिन, सकेसम्म विदेश भ्रमण नगर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै, अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि औषधि र अन्य उपभोग्य वस्तुको माग र आपूर्ति कमी हुन नदिन मातहतका मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारको यस्तो निर्णयलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण र असरलाई मध्यनजर गरी सरकारले जेजसरी पूर्वतयारी गर्न खोजेको छ त्यसबमोजिम आवश्यक गृहकार्य भने पुगेको छैन । नेपालमा उत्पादित ‘सर्जिकल माक्स’ले कुनै पनि संक्रमण नियन्त्रण गर्न सक्दैन । प्रायः धूलो छेक्ने माक्सको समेत नेपाली बजारमा अभाव देखिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल उच्च जोखिममा रहेको औँल्याएपछि बजारमा सर्जिकल माक्सको माग ह्वात्तै बढेको छ । विगतमा चीन र भारतबाट नियमित हुँदै आएको माक्स दुवै देशले पठाउन छाडेपछि नेपालमा अभाव भएको छ । नेपालमा तीन हजारको संख्यामा उत्पादन हुने माक्सले बजारको माग धान्न सकिरहेको छैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार उपचार गराउने एक बिरामीबाट अर्को बिरामीमा रोग फैलिन नदिन हरेक अस्पतालले छुट्टै आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरी उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा अस्पतालका क्याविनलाई नै आइसोलेसन वार्डको नाम दिइएको छ । कोरोना भाइरसका संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि आइसियू वा भ्यान्टिलेटर आवश्यक पर्छ । तर, आइसियू बेडमा अन्य बिरामी नै भरिभराउ हुन्छन् । अधिकांश अस्पतालले बिरामी आएमा बेड खाली गर्ने गरी तयारी गरेका छन् । कोरोनाका बिरामीको उपचार गर्न छुट्टै अस्पताल चाहिने भए पनि नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन । कोरोनाको विश्वव्यापी प्रकोप बढिरहँदा उपचार गर्दा स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने कवज पनि सीमितमात्रै रहेको बताइन्छ । संक्रामक रोगको उपचार गर्न चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारीको उच्च सुरक्षाका लागि सुरक्षा कवज अनिवार्य हुन्छ । यसका अतिरिक्त सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक तालिम पनि प्रदान गरिनुपर्छ । तर, तालिम दिइएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या नगन्य छ । उपचार गर्दा स्वास्थ्यकर्मीले पूरा शरीर ढाक्ने सुरक्षित लुगा, आँखा सुरक्षित गर्न चश्मा, भाइरस रोक्ने मास्क र पञ्जा आवश्यक पर्छ । एकपटक लगाएका लुगा विशेष किसिमले निर्मलीकरण गरेरमात्रै पुनः प्रयोग गर्नुपर्छ ।
कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन देशकै एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जम्मा आठ स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको छ । जब कि, कोरोनाको जोखिम उच्च र सुविधा न्यून रहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले नै स्वीकार गरेको छ । हेल्थ डेस्कमा जोखिमयुक्त काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई दैनिक तीन सयमात्रै भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ, यही भत्ताका भरमा स्वास्थ्यकर्मीले खाजा र यातायातको प्रबन्धसमेत आफैँले गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो दयनीय अवस्थाले स्वास्थ्यकर्मीहरु निराश भएका छन् । सरकारले चीनबाट फर्काइएका विद्यार्थीका लागि क्वारेन्टाइनमा राखेर जसरी प्रेमपूर्वक परीक्षण ग¥यो त्यसैगरी राजधानीबाहिर पनि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने अपेक्षा जनताले गरिरहेका छन् । कोरोनाका शंकास्पद बिरामीसँग प्रत्यक्ष संलग्न हुनुपर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा र सुरक्षाका विषयमा सरकारको ध्यान गएको छैन । आवश्यक उपकरण र सामग्रीको अभावबिना स्वास्थ्यकर्मीले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सक्दैनन् । कोरोनाविरूद्ध सजगता अपनाउनुमात्रै पर्याप्त हुँदैन । सातैवटा प्रदेशमा कोरोना उपचारको पूर्वतयारीका लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्री तथा उपकरणको बन्दोबस्त गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । सरकारले महँगी र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि जसरी आक्रामक बनेको छ त्यसैगरी स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा र सुरक्षाका विषयमा पनि प्रभावकारी उपस्थिति देखाउनु जरूरी भएको छ ।
ज्ञवालीको स्मृतिमा शोकसभा
अगाडिबाट ठक्करका कारण र सावधानी